महिलाहरुको संर्कीण मानसिकता या वाध्यता ?
माघको चिसो अनि धुम्मिएको दिनले कुढाएको मनलाई एक कप तातो चियाले अलिक न्यानो बनाएर म र मेरी सहकर्मी गीता त्रिपाठी कार्यलयको काममा ब्यस्त भइरहेकै बेलामा अकस्मात् मेरो मोबाइल बज्यो । हेरेको नयाँ नम्बर थियो "मेरो मोबाइल”को । फोन उठाएँ । एउटी महिलाले 'हेलो' भनिन् अनि तपाई कुमारी राई हो भनी सोधिन् । म छक्क परे आफूले कहिल्यै कल्पना नगरेको थर आफ्नो नामको पछाडि जोडिँदा । मैले सहजै 'हैन' भनेँ । के को लागि होला तपाइँ को बोल्नुभयो जस्ता प्रश्नहरु मैले पनि गरेँ । उनले आफ्नो बारेमा बताउन चाहिनन् त्यसैले मैले फोन राखेँ । अलिक अनौठो लाग्यो अकस्मात यस्तो फोन आउँदा । गीता पनि छक्क परिन् । फेरि हामी आफ्नै काममा व्यस्त रहयौं । केही समय पछि पुनः मेरो मोबाइल बज्यो म झस्किएँ । अहिलेको फोन ल्याण्ड लाइनबाट थियो । तर अचम्म फेरि त्यही महिला थिइन् । उनले फेरि त्यही कुरा दोहोर्याइन् 'तपाई कुमारी राई मगर कि लामा ? तपाई विवाहित कि अविवाहित ?" अब मलाई अलिक रिस उठ्यो त्यसैले मैले पनि राम्ररी नै जवाफ दिएँ । तपाईलाई मेरो व्यक्तिगत कुरा सोध्ने कुनै अधिकार छैन । बरु तपाई को र कहाँबाट के को लागि मलाई सोधपुछ गर्दैहुनुहुन्छ भनी सोधेँ । उनी निकैबेर मौन रही मेरो कुरा सुनिन् अनि भनिन् मैले यो नम्बर मेरो श्रीमान्को नोटबुकबाट पाएको र बुझ्नको लागि फोन गरेको । मेरो कन्सिरी झन तातियो अनि मैले पनि भनेँ तपाई कस्तो श्रीमती हुनुहुन्छ श्रीमान्को नोटबुक जाँच गर्दै जथाभावी फोन गर्ने । यति भन्दा भन्दै पनि उनले फेरि सोधिन् 'के तपाई दिपकलाई (नाम परिवर्तित) चिन्नुहुन्छ ? म दिपककी श्रीमती ।' म नै आश्चर्यमा परें आफूले कहिल्यै नचिनेको मान्छेको बारेमा मसँग सोधपुछ गरिदाँ । उनले यो पनि भनिन् कि आजकल मेरो श्रीमान् कुमारीसँग लागेको छ । उनको त्यो अन्तिम वाक्यले मलाई अक्क न बक्क बनायो । मैले सहन नसकी फोन राखें । म छाँगाबाट खसेंजस्तै भएँ । मुटुभित्र चसक्क सियोले घोचे जस्तै भयो । कहिल्यै सपनामा पनि नचिताएको मान्छेको नामसँग मेरो नाम जोडिँदा अनि उनकी श्रीमतीको लाछनाले भरिपूर्ण कुरा सुन्दा । ती महिलासँग भएको सम्पूर्ण कुरा सविस्तार गीतालाई सुनाएँ । उनी पनि आश्चार्यचकित भइन् । एकैछिन अगाडिको मेरो हँसिलो अनुहारमा एककिसिमको पीडाले धपक्कै ढाक्यो । गीताले मेरो पीडालाई सहजै महसुस गरी पीर नगर भनी सम्झाइन । तर म भित्र एकतमासको उथलपुथल चलि नै रहयो । म एउटी शिक्षिका जो विद्यार्थीहरुलाई नैतिकता र इमानदारीताको पाठ पढाउँछु तर मै माथि नै यस्तो लाछना मलाई सहिनसक्नु भयो । बाहिरको हुस्सुले ढाकेको नरमाइलो वातावरण जस्तै मेरो मन पनि झन झन अँधेरो र चिसो भयो ।
मलाई ती महिलाप्रति रिस पनि उठ्यो अनि दया पनि लाग्यो । यो वास्तवमा के हो त ती महिलाभित्रको संकीर्ण सोचाइको उपज या उनको श्रीमान्को कमजोरी । हामी अहिलेको आधुनिक नारीहरु जो समानताको लडाई लड्दै छौं पुरुषसँग काँधमा काँध राखी काम गर्ने र हक अधिकारको लागि लड्ने प्रण गर्दैछौं । यस्तै महिला अधिकार समानता अस्तित्वको लडाई आदि आदिको विषयमा बहस भइरहेकै बेला त्यस फोनले मलाई छुट्टै संसारमा डोर्यायो र एकपटक फेरि सोच्न वाध्य बनायो । के हामी महिलाहरु लोग्ने कोसँग बोल्छ कसको फोन नम्बर राख्छ भनी चियोचर्चा गरी अल्मलिँदै हिड्ने बेला हो यो ? के महिलाहरु यस्तै यस्तै कुराहरुमा अल्झीरहेका छन् ? सायद हो महिलाहरु यस्तै यस्तै कुराहरुमा अल्झीरहेका छन् । यो उनिहरुको रहर नभई वाध्यता पनि हुनसक्छ । उनिहरुको भित्रको डर या आत्मविस्वासको कमी हुनसक्छ । आफ्नो मान्छे कसैले लगिदिन्छ कि भन्ने पीर अथवा लोग्नेप्रतिको उनीहरुको अविश्वास । यो फोन त एउटा उदाहरण मात्रै हो । यँहा त दिनमा कैयौं कुमारीहरुलाई यस्तै फोनहरु आउँछन् होला । महिलाहरु आफ्नो व्यक्तित्व विकास र उन्नति भन्दा पनि विभिन्न शंका र समस्याहरुमा जेलिइरहेका छन् । यो किन त ? उनिहरुले आफूलाई पूर्णरुपमा साँघुरो मानसिकताबाट बाहिर निकाल्न नसकेर या यसो गर्नु उनिहरुको वाध्यता हो । किन लोग्नेहरु आफ्ना स्वास्नीहरुलाई विश्वास दिलाउन सक्दैनन् ? सायद ती महिलाको श्रीमान्ले उनलाई विश्वास दिलाएको भए जति जनाकै फोननम्बर राखे पनि उनले फोन गर्नेथिइनन् होला । लोग्नेहरु किन आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्वलाई बिसिएर स्वास्नीहरुलाई झन झन शंकालु बनाउँदै छन् । यो लोग्नेमानिसहरुको चाल हो या उनीहरुको प्राकृतिक गुण ? संसार त विश्वासमा नै अडेको छ । लोग्ने र स्वास्नी दुवैले एकअर्कालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ एक सफल दाम्पत्य जीवनको लागि । अनि श्रीमतीहरुपनि आफ्नो काम कर्तव्यलाई चटक्क बिसिएर अनावश्यक रुपमा श्रीमानहरुको चियोचर्चा गर्ने पट्टि नलागेर बरु आफ्नो व्यक्तित्वको विकासपट्टि लाग्नुपर्छ । अहिलेको संसारसँग आफूलाई अगाडि बढाउन आफूभित्र आत्माविश्वास र ज्ञान बढाउने पट्टि लाग्नुपर्छ । अब समय आइसकेको छ हामी नारी बनी शीर ठाडो पारी हिड्ने । ती झिना मसिना कुराहरुबाट आफूलाई मुक्त गरी विशाल मन र स्वतन्त्र विचार लिई अगाडि बढ्ने । यदि सबै नारीहरुले आफूलाई ती संर्कीण विचारहरुको परिधिबाट बाहिर निकाल्न सके सायद यस्ता अनावश्यक फोन कलहरु कहिल्यै आउने छैनन् ।
संस्मरणले आकर्षण गर्‍यो बा!!!